Umshini Wokugcwalisa Imithi Nemithi - Micvd.com
Umshini Wokugcwalisa Amakhambi & Nutraceutical
NPACK iyaziqhenya ngokunikela ngemishini yokufaka ye-liquid yemikhakha ehlukahlukene ehlukahlukene, kufaka phakathi amakhemisi kanye nezondlamzimba. Lapho udinga ukuthenga imishini yokufaka umugqa wakho wokupakisha, kubalulekile ukukhetha imishini eyakhelwe ukumelana namakhemikhali ozobe usebenzisa nawo, kanye nemishini eyakhelwe ukuhlala isikhathi eside. NPACK iyaziqhenya ngokunikeza imishini ehlangabezana nalezi zindlela zombili.
Ukukhetha Izinsizakusebenza Ezifanele Zokupakisha ezivela NPACK
I-viscosity, i-acidity, izakhiwo ezinwebekayo nokunye okuningi kwemikhiqizo yezemithi kwehluka kakhulu. NPACK kuklama amasistimu wokugcwalisa ngokwezifiso wemikhiqizo yezemithi noma eyondlayo yazo zonke izinhlobo, okuqinisekisa ukuthi imishini yokufaka amabhodlela owasebenzisayo kulayini wakho wokukhiqiza iyahambelana kakhulu namakhemikhali owenzayo.
Imishini yethu ingenziwa ukuze ihambisane nalezi zidingo, kufaka phakathi ukumelana nokugqwala. Imishini yokulwa ne-Corrosion ingakhiwa ngezinto zokwakha ezifana ne-HDPE (i-polyethylene ephezulu), i-UHMW, noma i-PVC, futhi kulula ukuzihlanza ukuze zisebenze kahle. NPACK ihlinzeka ngemishini ehlukahlukene, ngakho-ke noma ngabe udinga umshini owodwa nje njengokufaka okunye esikhundleni noma ukwengeza, noma wakhe umugqa wokufaka kusuka ekuqaleni, uzothola okudingayo lapha.
Izinsiza Ezitholakalayo Zemigqa Yokugcwalisa Ugesi
Siyaziqhenya ngayo NPACK ukwazi ukusebenzisa zonke izici zamaphakethe wokufaka, kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni. Lapho usebenzisa i-yokusungula yethu uzothola konke kusuka kubahlanza bamabhodlela ukuze uqiniseke ukuthi iziqukathi azinawo imfucumfucu ngaphambi kokugcwaliswa ngomkhiqizo, ukufaka amalebula imishini efaka amalebula womkhiqizo ezitsheni zakho. Siphinde futhi sinikele ngabathutha ukuletha iziqukathi esiteshini ngasinye, kanye nemishini eminingi yokugcwalisa uketshezi, kufaka phakathi:
Ama-filters wesisindo se-Net
Kungani Khetha NPACK Izinto Zokupakisha?
Ngaphandle kwezinhlelo ezilungile zamabhodlela, imikhiqizo yakho yezemithi neyondlekile ingathikamezeka ngenkathi kukhiqizwa. Ukonakala, amakhethini, amagwebu, izinsalela nokuningi konke kungenza kube nzima ukugcina amazinga okuthuthwa kwendle, kanye nokugcina umugqa wakho usebenza kahle. Okokusebenza kwethu kokugcwalisa kuklanyelwe ngezinhlobo zamakhemikhali kulayini womhlangano, ngakho uyazi ukuthi imikhiqizo oyigcwalisayo nokuyifaka emabhodleleni ngeke ibe nomthelela omubi kwimishini yakho — noma okuphambene nalokho.
Xhumana nathi namuhla ukuze ufunde kabanzi mayelana nezixazululo zemishini yokufaka amabhodlela esihlinzeka ngayo ukuze ihambisane nemikhiqizo ehlukahlukene yezempilo neyemithi. Siyajabula ukusiza amaklayenti ethu ukuthi athole imikhiqizo engcono kakhulu emugqeni wawo.
Ukugcwaliswa kweMonoblock noMshini we-Caps
Umshini uvumelanisa i-316L yensimbi engenasici ukuze ugcwalise izinhlobo ezahlukene ze-ketshezi, ukugcwaliswa nokufakwa ku-ciling kumshini owodwa. Guqula izinto zokugcoba, zokudla, ezemithi kanye nezimboni zamakhemikhali.
I-1.Guqa ngepompo engagcwalisa i-viscosity fluid, ukunemba okuphezulu, okulula ukuyihlanza nokuhlanzisisa.
Izingxenye zokuxhumana eziwuketshezi zingaba yinto ehlukile ukufanela uketshezi oluhlukile
Ukulungiswa okulula kwe-3.Filling ivolumu, kanye nokulungiswa okuncane okuhlinzekelwe i-nozzles ngayinye yokugcwalisa
Ama-nozzles wokugcwalisa angaba ngama-anti-drop, usilika, kanye nokuvuza; Ukugcwaliswa okungezansi kungashintshwa ukuze kutholwe uketshezi olunethambo
I-5.WILLIAMSON peristaltic pump noma i-ceramic pump kungokuzithandela
Into NP-MFC8 / 2 NP-MFC4 / 1
Ukugcwalisa amabhuzi 8 4
Ukulandela i-nozzles 2 1
Uhlu lokugcwalisa I-20 ~ 1000ml
Ububanzi bokugcwalisa obufanele 20-100ml \_50-250ml\_100-500ml\_200ml-1000ml
Izinhlobo ze-Cap Izicucu ezikhiyiwe, izikulufa ezikhohliwe, i-ROPP, i-Aluminium cap
Umthamo I-3600 ~ 5000b / h I-2400 ~ 3000b / h
Ukunemba ≤ ± 1 ％
I-Capping rate ≥99 ％
Air ingcindezi 0.4 ~ 0.6MPa
isisindo Net 1100kg 900kg
Isilinganiso (mm) 2600 × 1300 × 1600 2200 × 1300 × 1600
1.Ungumshini we-monoblock, wonga izindleko nendawo yokusebenzela
Umshini ungagcwalisa uketshezi olunciphile ku-viscosity liquid uma ukhetha uhlobo oluhlukile lohlelo lokugcwalisa
Ukugcwalisa ngokuzenzakalela kwamazinyo e-Cartridge Dental, Stoppering kanye ne-Capping Machine
Kusetshenziselwa amabhodlela amancane, nokugcwaliswa kwamabhodlela okungazinzile, ukumisa kanye nokukopisha, kuyinto esetshenziselwa Amabhodlela e-ketshezi, izindondo zokujova, kanye nekhabethe lamazinyo njalo njalo.
Isistimu ye-Adapt Nokia ne-PLC, ibhodlela lezinkanyezi ezinamasondo elijikelezayo ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okuqinile nokunemba okuphezulu.
Into NP-FSC2 / 1 NP-MFC4 / 2
Ukugcwalisa amabhuzi 2 4
Ukulandela i-nozzles 1 2
Umoya wokugeza umoya 1 2
Uhlu lokugcwalisa 1-10ml, 10-30ml, 30-100ml
Izinhlobo zokuma Irubber, ipulasitiki noma insimbi
Umthamo 30-40b / iminithi 60-80b / iminithi
isisindo Net 600kg 700kg
Isilinganiso (mm) 1500 × 1300 × 1800 1800 × 1500 × 1800
Uhlelo lwe-1.Nitrogen lokugeza ibhodlela ngaphambi kokugcwaliswa
I-2.Over system suction system
I-3.Automatic ngezansi yokumisa, ukugcwalisa nokubopha uphawu lwe-mono block
Ukugeleza kwe-4.Laminar kanye nomnyango wokuphepha
Uhlelo lokugcwalisa lwe-5.the lungakhetha ukugcwaliswa kwe-piston, ukugcwaliswa kwepampu ye-ceramic noma iphampu ye-peristaltic ye-WILLIAMSON.
Umshini wokugcwalisa i-auger we-othomathikhi kanye nomshini wokukopela
Ukugcwaliswa kwe-Powder kanye nomshini wokufaka i-ciling uhlelo lokusebenza lokugcwalisa i-powder okuzenzakalelayo Emabhodleleni, izinkomishi namathini, bese kugcwaliswa ngokuzenzakalela (uphawu) lwamabhodlela.
Ingasetshenziselwa ukugcwalisa i-glitter powder, i-pepper, i-cayenne pepper, i-powder yobisi, ufulawa welayisi, i-albhamuen powder, i-soy ubisi lwe-powder, i-coffee powder, umuthi we-powder, i-additive, umongo kanye nezinongo, njll.
Ingaxhuma ngetafula lokudla ibhodlela noma i-unsrambler kusuka ekuqaleni, nokuxhumeka ngomshini wokulebula we-NP-RL round noma umshini wokulebula we-NP-TS ohlangothini olulodwa olungumugqa wokugcwalisa ozenzakalelayo.
Isakhiwo sensimbi engenasisekelo, i-hopper split level, yokugeza kalula
IServo-motor eqhutshwa indiza.
I-Servo-motor elawulwa i-turntable ngokusebenza okuzinzile.
I-PLC, isikrini sokuthinta nokulawula imodyuli enesisindo.
imodeli I-NP-PAF-1 I-NP-PAF-2
Ubuningi bebhodlela Φ15-80mm (ngokwezifiso)
Ukuphakama kwebhodlela 15-150mm (ngokwezifiso)
Ukugcwalisa Isisindo 1 – 5g,5-30g,30-100,100-500g
Ukugcwalisa ukuchithwa ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g ， ≤ ± 1%
Isivinini sokugcwalisa I-15 - ama-35bottles / imizuzu 30 - 70 amabhodlela / imizuzu
Ukunikezwa kwamandla kagesi 3phase AC380V 50 / 60Hz
Ukuthengiswa Kwomoya 6 kg / cm2 0.05m3 / min
Amandla obuphelele 1.8Kw 2.3Kw
Ingqikithi yesisindo 450kg 550kg
Ubukhulu Bonke 1400 × 1120 × 1850mm 1700 × 1420 × 2000mm
I-Hopper Volume 35L I-25L (ama-hop hop amabili)
1. IServo motor eqhutshwa, i-Nokia PLC nesikrini sokuthinta
2. Vumelana ne-othomathikhi nge-powder feeder ukondla i-powder ku-hopper
3. Ihlanganiswe nesembozo sothuli nohlelo lokuthambisa uthuli lapho ugcwalisa impuphu.
4.KUKhulisa i-nozzle nokukhanda kwekhanda ukukhulisa amandla okusebenza